Isleegyada lagu daydo heerkulbeegga TM5, TM31 iyo TM21 | Xeerarka ThermoRecipes
Isbarbardhiga u dhexeeya moodooyinka Thermomix: TM5, TM31 iyo TM21
Bishii Sebtember 2014 Vorwerk waxay soo saartay moodelkeeda cusub ee loo yaqaan TM5. Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa soo iibsanayay sannadihii la soo dhaafay qaar ka mid ah oo qaabab hore u lahaa ayaa cusbooneysiinayay. Si kastaba ha noqotee, maadaama mashiinnadani ay leeyihiin nolol faa'iido leh oo dheer, weli waxaa jira qaar badan oo sii wadaya inay wax ku karsadaan TM31 (waxaa la soo saaray 2004) iyo, wax yar ka yar, oo leh TM21 (waxaa la soo saaray 1996). Ma rabtaa inaad wax ku karsatid moodooyinka oo dhan? Hagaag, waa lama huraan inaad ogtahay isbarbardhigga moodooyinka Thermomix TM5, TM31 iyo TM21.
Marka waa sidee kala duwanaansho yar Inta udhaxeysa TM5 iyo TM31, waxaan u maleynay inay waxtar leedahay in la qoro maqaal sharaxaya farqiga ugu weyn ee udhaxeeya 3-da aalado si aad uhesho tusaalaha aad heysato, waad sii wadi kartaa inaad ku raaxeysato cuntooyinkayaga oo aad si buuxda ula qabsato raaxo iyo, dhammaan, seguridad.
Isbarbardhiga u dhexeeya TM31 iyo TM5
Thermomix TM31 iyo Thermomix TM5
Farqiga u dhexeeya labadan nooc ayaa aad uga yar kuwa u dhexeeya 31 iyo 21, sidaa darteed way fududaan doontaa inaad la qabsato cuntadaada. Waxaad kaliya tixgelin doontaa laba dhinac oo aasaasi ah: the heerkulka ugu sarreeya iyo awoodda dhalada iyo weelka varoma. Aynu u aragno faahfaahin dheeraad ah:
Heerkulka ugu sarreeya ee TM5 wuxuu ka sarreeyaa 120º, halka TM31 kaliya ay gaarto 100º. Tani waxay ku fureysaa fursado kala duwan oo ah TM5, gaar ahaan marka laga hadlayo shiidan iyo walaaq la shiilay.
Sutéed iyo sautéed: TM5-ka waa inaan barnaamij ka dhignaa 120º iyo 8 daqiiqo. Inta aan ku jirno TM31 waxaan dhigeynaa heerkulka varoma, 10 daqiiqo. Hada TM5 -ka shiilku wuu kafiican yahay, kana dahab badanyahay. Badanaa waa la ogaan karaa markaan karno toonta, tusaale ahaan, inaan ku shubno kalluunka uumiga ah.
Heerkulka Varoma: TM31 waxaan u isticmaalnaa heerkulka Varoma ficil ahaan wax kasta: ku kuleylinta varoma, walaaq-shiil iyo fuud, yareynta cabitaannada ku jira suugada ... Si kastaba ha noqotee, TM5 waa inaan u isticmaalnaa oo keliya heerkulka varoma si aan u soo saarno uumiga una karino weelka varoma ama suugada yaree.
Karso 100º: Sida ku jirta TM31 ee TM5 waxaan sidoo kale ku kari karnaa khudaarta 100º, tusaale ahaan, sidaas awgeed waxaan door bideynaa ilaalinta sifooyinka cuntada ama bariiska, oo ku sii jiri doona barta saxda ah ee wax lagu karsado.
Awoodda weelka Varoma wuxuu kordhay 10%, laga bilaabo 3 litir ee TM31 illaa 3.300 ee TM5.
Tumbulaha ayaa sidoo kale kordhiyay awoodiisa 2 litir ee TM31 ilaa 2.200 ee TM5. Halkan waa inaad ka taxaddartaa maadaama cuntada TM31 si dhammaystiran looga samayn karo TM5, laakiin aan ahayn dhinaca kale maxaa yeelay muraayadda ayaa qarqi karta. Marka haddii aad rabto inaad ku samayso TM5 aaladda TM31, Hubi in aan la dhaafin calaamadaha awoodda ugu badan (2 litir).
Varoma sidoo kale waxay kordhisay awoodeeda tanina waa mid aad ufiican sida waxaan ku dari karnaa cuntooyin badan si aan uumiyo isla waqtigaas iyo inay ka jilicsan yihiin midba midka kale, oo u roon wareegga wanaagsan ee uumiga. Tusaale ahaan, hadda waxaan gelin karnaa laba seabass ama bream qaab raaxo leh ama khudaar badan. Sidoo kale waa waxtar marka la gelinayo qaabab afar gees ah ama shaqsiyeed caagag ama puddings maxaa yeelay moodooyin badan ayaa na soo gali doona.
Iyada oo TM5 ah xawaaraha 10 ama turbo ayaa kordhay illaa 10.700 rpm (halka TM31 uu gaaray 10.000). Tani waxay ka dhigaysaa diyaargarowga sida gazpacho ama kareemada waqti fiican.
Aynu ku aragno jadwalka si kafiican.
Jadwalka isu dhigma TM31 iyo TM5
Uumiga oo leh dambiil iyo / ama varoma Heerkulka Varoma Heerkulka Varoma
Heerkulka Varoma Heerkulka Varoma
Sauté ama sauté Heerkulka Varoma - 10 daqiiqo qiyaastii Heerkulka 120º - 8 daqiiqo qiyaastii
Awoodda max. ka mid ah galaas 2 litir 2,200 litir
Awoodda max. ka mid ah varoma 3 litir 3,300 litir
Mariposa Ugu badnaan xawaaraha 5 Ugu badnaan xawaaraha 4
Turbo (ama xawaare 10) Wuxuu gaarayaa 10.000 rpm Wuxuu gaarayaa 10.700 rpm
Isbarbardhiga u dhexeeya TM31 iyo TM21
Halkan waa a miiska isu dhigma taas oo ay tahay inaad si fudud u raacdo safka u dhigma, taasi waa, haddii habka cuntada loogu talagalay TM31 uu leeyahay "xawaaraha qaaddo" oo aad leedahay TM21, waxa ay tahay inaad sameyso waa xawaaraha barnaamijka 1 oo leh balanbaal… fudud, sax?
Hadda waxaad haysataa fure u ah la qabsato dhammaan cuntooyinka qaabkaaga TM21.
Jadwalka isbarbardhigga u dhexeeya TM31 iyo TM21
Xawaaraha baaldiga Xawaaraha 1 ee leh balanbaalis
Bidix u leexo Mariposa
Heerkulka 37º Heerkulka 40º
Heerkulka 100º Heerkulka 90º
Goynta, xawaaraha 4 Googooyo, xawaare 3 ama 3 1/2
Gubasho, xawaare 5 Gubasho, xawaare 4
Shred, xawaare 7 ilaa 10 Shred, xawaare 6 ilaa 9
Mount white, xawaare 3 1/2 Raac cad, xawaare 3
Sidaad arki doonto, waxaa jira farqi muuqda oo udhaxeeya moodellada 21 iyo 31, sida heerkulka uguyar ama xawaaraha howlaha aasaasiga ah ee jarista, xoqidda iyo xoqidda.